Zonke izingane ziyakuthanda ukudlala emanzini. Futhi akubalulekile kangako lapho ithuba zingena: edamini, ichibi noma ubhavu. Njalo ingane ngenjabulo ukuba sizethule umthetheli-mashumi-umkhumbi kulesi siphepho, ithimba sebedlula phakathi olwandle olunesivunguvungu.
Futhi ukujabulisa umntanakhe, akudingekile wamthenga amathoyizi abizayo. Vele ukumfundisa ukwenza isikebhe aphume iphepha. Lena inqubo kahle kulula ukuthi kuyasiza hhayi kuphela (ubuciko Japanese origami eba emihle motor amakhono yezandla futhi kugxilisa ukuphikelela nesineke), kodwa futhi othakazelisayo.
Ngakho, ukuze senze isikebhe aphume iphepha, ishidi engenalutho ukuma unxande. Ukuze okuvula, asithathanga indinganiso A4 format, okuvumela ukuba ukubonisa yonke inqubo. Kodwa ngemva umfundi kahle origami umkhumbi, kunengqondo ukuthuthela usayizi ezincane material. Kulokhu, ukusebenza yi kuyoba esinembile. Futhi ekuqaleni kwentwasahlobo lezifula izikebhe ezinjalo kuyoba lula kakhulu.
Okokuqala Songa ishidi letingemadayimenshini isigamu ohlangothini olude. Khona-ke akusho phakathi isimo esisha futhi zisebenza-ke emagumbini phezulu ukuze bathole onxantathu amabili alinganayo. Uma lo msebenzi usuphothuliwe, emapheshana khulula iphepha is curled phezulu. Tu- emakhoneni egoba lokuqala ohlangothini olulodwa, khona-ke elinye.
Okulandelayo kukhona inqubo elibanga obukhulu kulabo ukwenza umkhumbi ngezandla zabo okokuqala. Udinga ukuthatha ukuze uthole "cap" phezu Midway nhlangothi zombili, zokuwadonsela bacondze etindzaweni letehlukene, ukuvula nalutho. Ngesikhathi esiphezulu razdvizheniya kungenzeka, isikebhe esilandelayo sizokhuluma ngendlela rhombus, yini esiyidingayo ukuze sifinyelele. Sebenzisa umunwe wakho ku-emphethweni elalisanda kumiswa ukuze bahlanganise izibalo entsha.
Manje Songa emakhoneni ezansi rhombus phezulu kusuka zombili. Unxantathu thina obukwenza ajwayelekile: ukudalula, enika ukuma amadayimane. Isikebhe sethu ezenziwe iphepha isicishe ilungele. Into yokugcina sidinga - ukudonsa ohlangothini enezinto we rhombus bese uyaqondisa emphethweni nemaphakathi unxantathu.
Ungaqhubeka ithuba lokucwengisiswa imodeli: ukupenda ke, unamathisele insika, ukubeka abagibeli - ongakhetha anqunyelwe kuphela imicabango yenduna esizayo. Futhi kungenzeka ukubeka isikebhe ukuba untante ngakho kuphela, noma emphakathini nezinye izitsha eziningi. Lapho ihlobise umkhumbi kufanele bacabangele yokuthi, cishe, kuzophothulwa Hack mbeni amanzi, bese ukhetha ezifanele Umbala izinto.
Futhi, kungase kudingeke ukuba makudle iphepha obukhulu noma ecwebezelayo (ke livame ukusetshenziswa ukuphrinta ukukhangisa basakaza emgwaqeni). Kulokhu, isikebhe isikhathi eside, futhi ngeke ube ukupenda, ngoba amahlamvu ngokuvamile usunayo i ezinemibala egqamile, esebenza ukuheha ukunakwa.
Ungesabi ukuba ulinge futhi usungula ongakhetha ezintsha kanye inhlanganisela. Uma kwenzeka ukwehluleka, kukhona njalo ithuba lokwenza isikebhe entsha aphume iphepha, futhi uma wizadi abanesibindi aphumelele, kwakungase kahle kube induna le isitsha.
Decoupage - isigaba okuyinhloko. Decoupage amasu Wabasaqalayo
Side loops ngezinaliti ezingahlanzekile. Iphethini nge izihibe side (isithombe)
Ake sixoxe ngalokho amaphethini ngoba amagilavu (spokes)
Vase ebhodleleni ngezandla zakhe: nice elula
Kanjani ukuba ngiyeke ukubhema futhi hhayi isisindo. Indlela esebenzayo ukuyeka ukubhema
Imininingwana ezeleko sendlela ukuvula isikhwama "Kiwi"
Puzzle logic - impumelelo ingane esikhathini esizayo
Kungakanani iyona Ukukhipha isisu okulingana yemali zokuziphatha?
Biglion - isehlukaniso noma iqiniso?
Ukwehla kwentengo. Wonke umuntu kumele bazi usomabhizinisi!
Khetha umbala ekhishini
Indlela ukuzola ngaphambi ukuhlolwa: Amathiphu isazi sokusebenza kwengqondo
Iphethini izikhwama jeans ngezandla zakhe: uyenze ukuze iso, ukuhlobisa nge umphefumulo